Salah, Shaw, Bellerin, Dzeko, Malcom, Ramsey & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala iibsiga – Kooxda.com
Home 2018 March Suuqa, Wararka Maanta Salah, Shaw, Bellerin, Dzeko, Malcom, Ramsey & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala iibsiga
Kooxaha Barcelona, Paris St-Germain & Real Madrid ayaa xiiso u qaba saxiixa xiddiga kooxda Liverpool ee Mohamed salah oo 25 jir ah iyaga oo isku diyaarinaya in ay 200 oo milyan ku dalbadaan xiddiga reer Egypt (Sun).
Liverpool ayaa diidi doonta isku day kasta oo lagu Doonayso saxiixa Mohamed salah xilli ay kooxda Anfield ku ciyaarta isku diyaarinayso in ay ku tartanto horyaalka xilli ciyaareedka dambe (Times).
Daafaca kooxda Man United ee Luke Shaw oo 22 jir ah ayaa dareensan in uu Jose Mourinho ka eryayo kooxda waxana uu isku diyaarinayaa in uu ka dacweeyo agaasimaha kooxda ee Ed Woodward (Mirror).
Luke Shaw ayaan lagu qasbi doonin in uu ka tago Man United xagaaga isaga oo doonaya in uu dhamaysto heshiiskiisa si xor ahna uga tago xagaaga 2019 (Guardian).
Kooxda chelsea ayaa hogaaminaysa tartanka loogu jiro saxiixa Luke Shaw hadii uu go,aansado in uu isaga tago kooxda Man United Xagaaga (Mail).
Tabaraha Kooxda Man United ee Jose Mourinho ayaa isku diyaarinaya in uu u dhaqaaqo xiddiga khadka dhexe ee kooxda Arsenal ee Aaron Ramsey oo 27 jir ah (Star).
Man United ayaa haatanba kooxda Arsenal wax ka waydiisay saxiixa daafaca reer Spain ee Hoctor Bellerin Laakiin Juventus ayaa ugu cad-cad in ay hesho saxiixa 23 jirka (Mirror).
Kooxda Tottenham ayaa dalab 40 Milyan ah kula laabanaysa kooxda Crystal Palace oo ay ka doonayso xiddiga garabka ka ciyaara ee Wilfried Zaha Laakiin Palace ayaa rumaysan in uu ka qaalisan yahay (Mail).
Kooxda Arsenal ayaa ugu dambayn go,aansatay in ay goolhayaha kooxda Bayer Leverkusen ee Bernd Leno ku badasho Goolhaye Petr Cech waxana ay qorshaynaysaa in ay dalab 25 milyan ah ka gudbiso (Sun).
Heshiiskii uu Weeraryahanka reer Bosnia ee Edin Dzeko ugu biiri lahaa kooxda chelsea suuqii January ayaa bur-buray kadib markii Roma ka baxday heshiiska (Radio Rai).
Tababaraha Kooxda Bayern Munich ee Jupp Heynckes ayaa meesha ka saaray in ay kooxdiisu u dhaqaaqi doonto xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Bordeaux Malcom (Evening Standard).